Ampidiro - Rikoooo
Avoahy ny Rikoooo
Print	karazana verinia
Vaovao farany amin'ny 11 May 2020 .
Mitady vaovao foana isika add-ons hamoaka ao amin'ny Rikoooo.com. Raha mpamorona ny votoaty Flight Simulator ianao ary vonona ny hampakatra ny famoronana ao amin'ny tranokalanay, aza misalasala mifandray aminay amin'ny alàlan'ny mpitondra hafatra ao amin'ny Facebook.
Azafady, tadidio fa ny rafitra ampiakarin'ny votoatintsika dia mandeha hafa amin'ny tranokala hafa. Ny fangatahana rehetra dia nohamarinin'ny ekipanay. Raha ny marina, tokony ho mifanaraka amin'ireto fepetra manaraka ireto ny fangatahana:
Ianao no tokony ho namorona ny add-on mba maniry ianao hampakatra na nahazoana alalana avy amin'ny mpamorona tany am-boalohany ary afaka manaporofo izany.
Ny fiara rehetra dia tokony ho feno, izany hoe feo miaraka, sakamalaho virtoaly sy textures misy fanapahankevitra tsara. Ny modely amin'ny fiara, tranobe na zavatra hafa dia tsy maintsy mifandrindra amin'ny zava-misy.
Manaiky ianao fa napetraka miaraka amin'ny installer automatique ny votoatinao ary raha ilaina ny ovaina arakaraka an'ity format ity.
Izahay dia manana ny zo handà ny fangatahana araka ny fenitray momba ny kalitao. Amin'ny alàlan'ny famaritana, Rikoooo dia tranonkala manolotra votoaty avo lenta sy fatratr'asa.
Ny tombony Rikoooo
- Ny votoatinao dia ho azon'ny mpihaino maro ary mahazo fahitana.
- Ny pejin-tranonkala miaraka amin'ny atiny dia hasongadina ao amin'ny Fikarohana Google ary haseho eo amin'ny valin'ny pejy voalohany an'ny Google (noho ny SEO tsara ananantsika).
- Ny pejy web amin'ny fampiantranoana ny votoatinao dia adika amin'ny fiteny mihoatra ny 64.
- Ny installer automatiora tsotra sy mahazatra ary matihanina dia hanao ny asa rehetra ho an'ireo mpampiasa anao.
- Miambina izahay ny hamorona ny pejy hampiantrano ny atiny, miaraka amina famaritana misy ny fampahalalana rehetra ilaina.
- Azonao atao ny mahazo vinavina amin'ny fanehoan-kevitry ny mpampiasa Facebook amin'ny alàlan'ny tranokalantsika sy mamaly azy ireo.
Mankasitraka ny ekipa Rikoooo.